Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo kuxigeenadiisa oo Khilaaf ka soo shaac-baxay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Warar lagu kalsoonaan tilmaamaya ayaa sheegaya inuu soo if baxay khilaaf u dhaxeeya Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) iyo qaar ka mid ah kuxigeenadiisa, kaasoo ku saabsan awooda xaga maamulka ah.
Khilaafkan oo in muddo ah soo jiitamayay ayaa soo banaanka u soo baxay kadib markii Kuxigeenada Maamulka Gobolka Banaadir ay dacwad ka dhan ah Gudoomiyaha u gudbiyeen Madaxweynaha.
Wararka ayaa intaa ku daraya in dacwadan ay salka ku heyso eedeymo iyo tabashooyin ay qabaan Guddoomiye kuxigeenada, waxaana ka mid ah in Guddoomiyaha uu isku koobay awooda guud ee xaga maamulka, la tashi la’aan dhinaca go’aanada marka la gaarayo.
Guddoomiye kuxigeenada dacwada gudbiyay ayaa waxaa ka mid ah Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Banaadir ee dhinaca Maaliyada Ismaaciil Guure, Guddoomiye kuxigeenka dhinaca Arrimaha Bulshada Iimaan Iikar iyo Howlaha Guud, inkastoo wada hadalo hoose ay socdaan oo ku aadan sidii ay isugu soo dhowaan lahaayeen.
Sidoo kale Kuxigeenada Gobolka Banaadir ayaa ku doodaya in aan lagala tashan dhulal uu bixiyay Guddoomiyaha, sida Jardiino iyo dhulal kale, isla markaana aanay shaqooyinkooda aanay u madax banaaneyn, ayna jiraan agaasimayaal ka awood badan kuna dhow Guddoomiyaha.
Si kastaba ha ahaatee khilaafkan soo shaac baxay ee u dhaxeeya Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo kuxigeenadiisa ayaa ku soo beegmaya, iyadoo Guddoomiyuhu booqasho ku joogo magaalada Nairobi ee dalka Kenya.